Iprofayile yeNkampani-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Ikhaya > Ngathi >Iprofayile yekhampani
Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited. Iqela elinamandla nelinobuchule lijolise kwiimveliso zegumbi lokuhlambela ngakumbi kwiimveliso zeshawari: intloko yeshawari, iseti yeshawari, ithumbu leshawa, isilayidi sokutyibilika.
Sikwisixeko saseCixi apho amawaka eentloko zeshawa kunye nomzi mveliso wethumbu apha, uninzi lwazo ziifektri zosapho ngaphakathi kwabasebenzi abali-10, inzuzo yethu kukugcina ubudlelwane obuhle kunye neefektri ezininzi ezilapha kwaye sibancede bathumele iimveliso kwihlabathi, kunjalo thina. kwakhona ukunceda umthengi ukufumana elona xabiso lilungileyo apha. Musa ukuzikhathaza ngomgangatho, sinenkqubo yokuhlola engqongqo ukuqinisekisa umgangatho. Sikulo mgca ngaphezu kweminyaka eyi-10, ngoko ke siyazi ukuba sigxile kwi-chrome, ukuvuza, ukuziva utshintsho lomsebenzi kunye nokunye.
Sikwanayo nesebe lethu loyilo, ukuba ufuna ukuyila intloko entsha yeshawa okanye ufuna ukuvula isikhunta kwishawa yangoku kodwa ukusika iindleko, sifumane nje, zama ukuyila i-mold yexabiso elifanelekileyo kuwe.
Igumbi lokuhlambela losapho, igumbi lokuhlambela lehotele, igumbi lokuhlambela...
ACS, Rohs, Fikelela,CE/
240 iiseti zokubumba umatshini wokubumba,
Iiseti ezingama-30 zomatshini wombhobho weshawari
Iiseti ezi-8 zomatshini wokupakisha
EU, Middle East, South America, Southeast Asia